IGAD: Alshabaab ka joojin karaan booqashada madaxweynaha Turkiga ee Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ururu Goboleedka IGAD ayaa sheegay in Alshabaab aysan awood u laheyn iney carqaladeyso booqashada madaxweynaha dalka Turkiga, Reccep Tayyip Erdogan uu ku tegayo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
War saxaafadeed kasoo baxay urur goboleedka IGAD ayaa looga hadlay qaraxii maalintii khamiista ka dhacay afaafka hore ee Hotelka SYL, halkaasi oo ay ku sugnaayeen wafdi ka socda dowlada Turkiga.
“Inkasta oo 5 qof oo ay ku jiraan saddex xubno ka tirsan ciidamada ammaanka noloshooda qaaliga ah ku waayeen, haddana ma awoodi doonaan in ay joojiyaan Al-Shabaab safarka taariiqiga ah ee Erdogan”ayuu lagu yiri bayaanka.
War saxaafadeedka IGAD ayaa lagu sheegay in dowlada iyo shacabka Soomaaliyeed ay go’aansadeen dhismaha wadankooda oo muddo badan dagaalo sokeeye ay ka jireen.
“Somaliya oo laga hirgeliyay dowlada Federaal ah, baarlamaan shaqeynaya iyo hayadaha amaanka, suuqyo shaqeynayo, iskuulo iyo adeegyo caafimaad ayaa dooneyso horumar amaan”ayaa lagu yiri warka IGAD.
Gaari laga buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa Khamiistii bisha Janaayo aheyd 22 lagu weeraray hotelka SYL, iyadoo la sheegay in ku dhawaad 5 ruux ay ku dhinteen weerarka, mana jirin waxyeelo soo gaartay shaqaalaha turkiga ee Hotelka ku sugnaa.
Hotelka qaraxu ka dhacay ee SYL ayaa ahaa hotelkii 10-kii bishaan Janaayo si nabad ah ay shir ugu yeesheen wasiirada arrimaha debadda dalaka ku jira ururu goboleedka IGAD.
Waxaa masuuliyada weerarkaasi sheegtay Alshabaab oo sheegay in bartilmaameydkooda ahaa saraakiil Turkish ah oo hotelka kus ugnaa.